हरिशयनी एकादशी,तुलसी रोप्ने दिन,सनातन धर्मावलम्बी किन गर्छन् तुलसीको पूजा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
हरिशयनी एकादशी,तुलसी रोप्ने दिन,सनातन धर्मावलम्बी किन गर्छन् तुलसीको पूजा ?
प्रकाशित मिति: २७ असार २०७६, शुक्रबार July 12, 2019
काठमाडौं । घरघरमा तुलसी सारेर शुक्रबार हरिशयनी एकादशी मनाइँदै छ। एक महिनाअघि जेष्ठ शुक्ल एकादशी (निर्जला एकादशी) मा छरिएको तुलसीको बीउ तयार भई यसैदिन रोप्नुपर्ने मान्यता छ। असार शुक्ल एकादशी शुक्रबार तुलसी रोपण गरेर ठूली एकादशी मनाइँदैछ । भगवान् विष्णु चार महिनाका लागि जल शयनीमा रहनुहुने शास्त्रीय मान्यताअनुसार तुलसी रोपण गरेर व्रत बसेर यो पर्व मनाइँदैछ । यो दिन जान्नेले पानी रोटी खान्छन् भनिन्छ । डा। लोकराज पौडेलका अनुसार यो एकादशीपछि हरिबोधनी एकादशीका दिनसम्म शुभकार्य नगर्नु भन्ने ज्योतिषीय मान्यता छ ।
यो अवधिमा ज्योतिषले शुभकार्यको घडीपला तोक्ने गर्दैनन् । तुलसीलाई आयुर्वेदमा महìवको वनस्पतिका रूपमा व्याख्या गरिएको वैद्यराज सुवर्ण वैद्य बताउनुहुन्छ । पशुपतिमा शुक्रबार आर्यघाट बागमतीमा तुलसीको डोरो राख्ने चलन छ । अमालकोट कचहरीका द्वारे पूर्ण डङ्गोलका अनुसार आर्यघाटमा अमालबाट तुलसीको बिरुवा दिएर रोपण आयोजना भएको छ ।
तुलसी सनातन धर्मावलम्बीका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण वनस्पति। हरिशयनी एकादशीका दिन आँगनमा रोपेर चतुर्मासभर पूजा गरिन्छ। चार महिनापछि हरिबोधिनी एकादशीको दिन विवाह गरेपछि तुलसीको पूजा अनुष्ठान पूरा हुन्छ। भगवान् विष्णुको स्वरूपको रूपमा मानिन्छ, तुलसी।
पुराणहरू विष्णुले वृन्दा श्राप पाई तुलसीको रूपधारण गरेको उल्लेख छ। कतै वृन्दा नै तुलसी भएको बताइएको छ। त्यसैले यसलाई विष्णुप्रिया पनि भनिन्छ। पुराणका कथाहरूमा जे भए पनि धार्मिक कार्यहरूमा नभई हुँदैन तुलसी। नारायणपूजामा तुलसीपत्र वा मञ्जरी अनिवार्य मानिन्छ। श्राद्धमा पनि तुलसीपत्र चाहिन्छ।
अरुपूजामा पनि नैवेद्य आदिमा तुलसीपत्र हाल्ने चलन छ। तुलसीको मठलाई तीर्थस्थलसरह मानिन्छ। यहाँ माटो पनि पवित्र मानिएको छ। देवकार्य वा पितृकार्य तुलसीको मठनजिकै गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। वैज्ञानिक दृष्टिले पनि धेरै अक्सिजन फ्याँक्ने विरुवाको रूपमा यसको महत्त्व छ। यसको गन्धका कारण वरपर विषालु किराहरूले दुःख दिँदैनन्। आयुर्वेदमा यसबाट बनेका अनेकौँ औषधि छन्।
तुलसीका जरा, ठाँड, पात, फल र फूल(मञ्जरी) औषधिमा प्रयोग हुन्छ। सनातन धर्ममा उल्लेख त्रिदेवमध्ये ब्रहमाले सृष्टि गर्ने, विष्णुले रक्षा गर्ने र महेश्वरले संहार गर्ने उल्लेख छ। तुलसीले पनि मनिसको स्वास्थ्यरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कारण यसलाई विष्णुको रूपमा वा विष्णुप्रियाको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा रहेको बुझिन्छ।
एमालेले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्‍यो : अध्यक्ष महतो
लहान । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन र सङ्घीयता असफल भए विखण्डनकारीलाई बल पुग्ने […]
काठमाडौं । ओखलढुङ्गामा बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । १५ जना घाइते भएका छन् । काँकडभिट्टाबाट […]
भारतको नेपाल दौड: ओलीको राष्ट्रवाद र लम्सारवादको निरन्तरता
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष ओली भारतीय नाकाबन्दी पछि नेपाली राजनीतिमा एक राष्ट्रवादी छबीको रुपमा उभ्रिएका […]
ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्न खोज्दा उनी उल्टो बाटो हिँडे
असार ६ । काठमाडौं, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा आएको मौका छोप्न नसक्दा नेपालका शान्ति […]
मध्यरातमा लगातार भूकम्प
असार १५ । काठमाडौँ, सोमबार राति ११ बजेर २७ मिनेट जाँदा सिन्धुपाल्चोककोे थाङ्पालधाप नजिक केन्द्रबिन्दु भएको […]
साथसाथै हिड्न सके मात्र प्रगति सम्भव – मोदी
मङ्सिर १०, काठमाडौँ- काठमाडौंमा जारी १८औ सार्क शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र […]